Ikhekhe Elisha Le-Strawberry Nge-Strawberry Buttercream - Ikhekhe
Ukuqothuka Kanye Nokuthwebula
Ikhekhe elisha le-Strawberry Nge-Strawberry Buttercream Recipe
Ikhekhe le-Strawberry nge-strawberry buttercream eyenziwe ngama-strawberry amasha!
Ikhekhe le-Strawberry elenziwe ngama-strawberry amasha futhi alikho i-Jell-O? Yebo, kungenzeka futhi kumnandi! Imfihlo ingeza okusha ukunciphisa isitrobheli kubhake ikhekhe lakho uphinde uhlanganise okusele ku- iqhwa lebhotela iresiphi entsha yekhekhe le-sitrobheli enambitheka njengama-strawberry wangempela!
Uma uke waya ePinterest muva nje, uzoba nezindlela zokupheka ezingaba yisigidigidi esisodwa ngekhekhe le-sitrobheli. Ngizamile okumbalwa kumabhulogi anamagama amakhulu ebengicabanga ukuthi angalethwa ngokuqinisekile kanti umfana ngidumele. Izindlela zokupheka eziningi zaziqukethe iJell-O yokunambitheka kwe-sitrobheli noma ukusetshenziswa komxube webhokisi.
“Ukhala buthule izinyembezi zobuhlungu”
iresiphi engqimba yekhekhe kusukela ekuqaleni
Bengifuna nje iresiphi elula yokwenziwa eyenziwe ngama-strawberry wangempela! Ingabe lokho akukuningi kakhulu ongakubuza?
Manje angisiye umbhaki ohamba phambili emhlabeni kodwa ngijabulela inselelo ngakho ngazibekela ukuthi ngizokwazi yini ukwenza ikhekhe lesitrobheli elihle impela. Ngizinikeze imithetho emibili. Bekufanele ngisebenzise ama-strawberry wangempela futhi ukunambitheka bekufanele nginambithe njengama-strawberry wangempela kwikhekhe kuphela.
Ungakwazi ukwenza ikhekhe elisha le-sitrobheli ngaphandle kukaJell-O?
Manje ungangizwa kabi. Ngiyangithanda iJell-O kepha hhayi kumaqebelengwane ami. I-Gelatin akuyona into ebengingacabanga ukuyifaka kwikhekhe lami ukwenza ukukhanya kukhanye ku-fluffy, kufane ne-gummy futhi kuminyene. Ngicabanga ukuthi into ebi kakhulu ngekhekhe le-sitrobheli elenziwe noJell-O ukuthi linambitheka njengama-strawberry mbumbulu.
Kuhle kakhulu kuma-rancher jolly kodwa hhayi kakhulu kwikhekhe lami. Ngakho enye yezinselelo zami kwaba ukwenza ikhekhe le-sitrobheli ngaphandle kwe-gelatin.
Ukuhlolwa okusha kwekhekhe le-sitrobheli bese kwehluleka
Ngakho-ke ngaqala ukuhlola izindlela zami zokupheka zekhekhe le-sitrobheli. Angikaze ngisebenze isikhathi eside kanzima kanzima kwiresiphi eyodwa. Imizamo eminingi yehlulekile futhi ngacishe ngayeka. Lokhu kungenzeka ukuthi kunemininingwane eminingi kunendlela owake wakwazi ngayo mayelana nekhekhe le-sitrobheli.
Nazi ezinye zezinto engizamile ukuzenza ngempumelelo ikhekhe le-sitrobheli ngama-strawberry amasha.
ungenza kanjani ukugcwaliswa kophayi ngezithelo ezibandisiwe
Ungangeza nje ama-strawberry amasha kwikhekhe le-vanilla ukwenza ikhekhe le-sitrobheli?
Wake wayibona ividiyo yokubhaka lapho bevele basike ama-strawberry amasha bese bewafaka ku-batter cake bese bethi iyathandeka ngendlela emangalisayo? Ngiyaxolisa, kodwa lokho kungamanga amakhulu amakhulu.
Lapho ama-strawberry ebhakwa, awagcini nje ngokulahlekelwa ukunambitheka kwawo kwe-sitrobheli kepha ajika umbala ompunga oxakile futhi odabukisayo. Empeleni ibukeka njengezikhwama zezithelo ezibolile ku-batter yekhekhe. HHAYI mnandi nhlobo!
Esivivinyweni sami sokuqala, ngiqunule ama-strawberry amasha ngakhipha ujusi wawo. Ngingeze ama-strawberry aqoshiwe ku-batter nejusi ebisini. Ngikhiphe inani elifanayo lobisi njengejusi engilifakile ngakho-ke bengingangezi uketshezi oluthe xaxa ku-batter wami. Nginciphise ushukela nge-1 oz ukuphendula noma yimuphi ushukela kuma-strawberry.Benginesiqiniseko sokuthi lokhu ngeke kusebenze kepha bengifuna nje ukuqiniseka. Njengoba ngangesaba nje, leli khekhe lalimanzi kakhulu, liminyene futhi linsundu. Hhayi ikhekhe elihle le-sitrobheli ebengilicabanga.
Freeze-Omisiwe Strawberry Ikhekhe Test
Kulolu vivinyo, nginqume ukusebenzisa ama-strawberry omisiwe. Ngokuqinisekile akutholakali kalula njengokusha kepha izindawo eziningi ziyaziphatha. Azishibhile futhi. Isikhwama esingu-1.7oz singibize cishe ama- $ 4. Ngisebenzise sonke isikhwama.
Ngagaya ama-strawberry ami nge-spice grinder, ngakhipha iziqu ezinkulu futhi ngangeza kwizithako zami ezomile. Benginomuzwa wokuthi leli khekhe lingadinga umswakama owengeziwe ngakho ngafaka iziphuzo futhi ngangeza uwoyela omncane wemifino. Ngiphinde ngangeza ukuthintwa kombala wokudla obomvana nobomvu ukuphikisana nsundu.
Leli khekhe belilihle impela! Imvuthuluka ibimnandi kakhulu, ukunambitheka bekuyiphunga elikhanyayo kakhulu, le-tart sitrobheli futhi nakanjani kuwine encwadini yami! Kepha bengisafuna leyo recipe ngama-strawberry WANGEMPELA.
Nginqume ukwenza olunye uvivinyo.
Ikhekhe elisha le-sitrobheli elenziwe ngokwehliswa kwe-sitrobheli
Ngangizamile ukusebenzisa ukwehliswa kwe-sitrobheli ezivivinyweni ezedlule kepha ukuthungwa kwakuseyigummy ngempela. Ngalesi sikhathi ngizamile ukunciphisa uketshezi ngokuqhubekayo ukwenza ukuncipha okukhulu. Ngiphinde ngangezela ku-lemon zest ukuqinisa ubumnandi bokunambitheka kwe-sitrobheli.
Ngiphinde ngasebenzisa i-sitrobheli emulsion esikhundleni sokukhishwa kwe-sitrobheli (akudingekile kepha kusiza ngombala nokunambitheka). Ngiphinde ngangeza amaconsi ambalwa wombala wokudla opinki kagesi ukuthola lowo mbala obomvana engangiwufuna.
Umphumela? Ikhekhe le-sitrobheli elimanzi futhi elibucayi elimnambithe KANJALO njengama-strawberry.
Angikudingi, ngamemeza ngenjabulo lapho ngisika leli khekhe! Imvuthuluka yayiphelele! Ukunambitheka kuyamangalisa! Ngigijime kakhulu ngaya kuwo wonke amakamelo endlu ngiphoqa indodakazi yami, umyeni wami nomsizi wabo ukuthi bonke bazame ikhekhe ngokushesha. Bengifuna ukuqiniseka ukuthi angivele ngihlanye. Ukuthi lokhu bekuyinto yangempela!
Rave ukubuyekeza nxazonke! * ukuziphakamisa okuphezulu *
isinkwa se-focaccia sibukeka kanjani
Indlela yokwenza ukuncipha kwe-sitrobheli
Hlanganisa ama-strawberry akho noshukela epanini elingaphakathi. Uma iqandisiwe, yikhiphe kuqala. Uma zintsha susa iziqongo bese uzisika zibe yizigaxa. Hlanganisa ne-blender yokucwilisa uma ukhetha ukuncipha okushelelayo.
Letha ingxube kumathumba bese wehlisa uye phansi bese uyeka kubile. Ngezikhathi ezithile ugovuze ukuvimbela ukushisa.
Lapho ukuncishiswa kwe-sitrobheli kukhulu njengokunamathisela utamatisi, usulungile!
Hlanganisa ku-zest kalamula, ijusi nosawoti.
Vumela ukunciphisa isitrobheli kuphole ngaphambi kokukusebenzisa ku-batter yakho yekhekhe. Ngisebenzisa uhhafu ku-batter nengxenye ku-frosting!
Ungayenza kanjani ikhekhe lakho lesendlalelo sitrobheli
Uma udinga imininingwane engaphezulu yokuthi ungabanda kanjani futhi ugcwalise ikhekhe, hlola eyami indlela yokwenza isifundo sakho sokuqala sekhekhe
Qiniseka ukuthi amakhekhe akho abanda noma afriziwe ngokwengxenye lapho ufaka ukuze kube lula ukuwaphatha. Gweba emaphethelweni ansundu neziqongqo uma ufisa.
Yenza i-buttercream yakho bese uyigoqa ekunciphiseni kwe-sitrobheli okusele ukuze uthole isithwathwa esisha futhi esihlwabusayo!
Beka ungqimba lwakho lokuqala lwekhekhe le-sitrobheli phansi bese usabalalisa ungqimba oluvulekile lweqhwa. Zama ukuyigcina isicaba.
Beka ungqimba lwakho olulandelayo lwekhekhe phezulu bese uluphinda ngezingqimba ezisele.
Mboza lonke ikhekhe ungqimba oluncane lwebhotela le-sitrobheli bese ubanda esiqandisini imizuzu engama-20 kuze kube yilapho i-buttercream iqinile. Lokhu kubizwa ngokuthi ijazi lemvuthu.
Frost ikhekhe ngendwangu yokugcina ye-buttercream bese uyihlobisa njengoba uthanda! Lekhekhe kufanele lifakwe esiqandisini kuze kube yilapho liphakwa. Vumela ikhekhe ukuthi lihlale ekamelweni lokushisa amahora amabili ngaphambi kokuphaka. Ikhekhe elibandayo alinambitheki neze!
Ngiyethemba uyayijabulela le recipe! Sicela uxhumanise nale recipe uma uyenzela ukuze ngibone indalo yakho!
Lekhekhe elisha le-sitrobheli lenziwa ngokuncishiswa kwe-strawberry! Ikhekhe limanzi futhi lithambile ngombala omuhle obomvana. Ikhekhe elihle ehlobo! Le recipe yenza ama-cake we-8'x2 'ama-cake nge-strawberry buttercream nokugcwaliswa kwe-sitrobheli. Isikhathi sokulungiselela:amashumi amabili amaminithi Isikhathi Sokupheka:amashumi amahlanu amaminithi Isikhathi esiphelele:1 hr 10 amaminithi Amakholori:603kcal
Izithako Zekhekhe Elisha Le-Strawberry
▢14 ama-ounces (397 g) ufulawa wonke wenhloso
▢1 1/2 amathisipuni iphawuda wokubhaka
▢1 isipuni okukhukhumalisa amakhekhe
▢1/2 isipuni usawoti
▢8 ama-ounces (226 g) ibhotela elingenawo usawoti lokushisa ekamelweni
▢10 ama-ounces (284 g) ushukela ogqamile
▢1 isipuni i-vanilla
▢1/2 isipuni ulamula
▢1 1/2 isipuni isitrobheli emulsion noma ngikhiphe, ngisebenzisa i-LorAnn oyili emulsion yokubhaka
▢i-zest eyodwa ilamuna
▢1 Isipuni ijusi kalamula okusha
▢6 ama-ounces (170 g) abamhlophe bamaqanda lokushisa ekamelweni
▢4 ama-ounces (113 g) ukunciphisa isitrobheli lokushisa ekamelweni
▢6 ama-ounces (170 g) ubisi lokushisa ekamelweni, ubisi lonke lungcono kakhulu
▢1/2 isipuni Umbala wokudla opinki Ngisebenzisa i-Americolor electric pink gel
▢32 ama-ounces (907 g) ama-strawberry amasha noma afriziwe ukuncibilika
▢1 isipuni uketshezi lukalamula
▢1 Isipuni ijusi kalamula
▢1 nciza usawoti
▢4 ama-ounces (113 g) ushukela ongakukhetha
I-Strawberry Buttercream Frosting elula
▢4 ama-ounces (113 g) amaqanda abamhlophe abancishisiwe
▢16 ama-ounces (454 g) ibhotela elingenawo usawoti lokushisa ekamelweni
▢16 ama-ounces (454 g) ushukela oluyimpuphu
▢I-mix mixer enamathiselwe we-whisk ne-paddle (noma i-mixer yesandla)
▢Amapani amathathu amakhekhe ayisiyingi, ama-8'x2 '
Imiyalo Yokunciphisa i-Strawberry
Ngincoma ukwenza lokhu kuncishiswa kusasele usuku ngaphambi kokuba usukulungele ukwenza ikhekhe lakho.
Faka ama-strawberry afriziwe amasha noma ancibilikisiwe epanini elingaphakathi. Okuzikhethela: hlanganisa ama-strawberry nge-emersion blender uma ukhetha ukuthungwa okushelelayo kokuncipha kwe-sitrobheli.
Sishisa ngokulingene phezulu bese ufaka ushukela (uma ufisa), i-zest kalamula, ujusi kalamula nosawoti. Hlanganisa ngezikhathi ezithile ukuvimbela ukushisa.
Uma usubhubhuza, yehlisa ukushisa uye phakathi nendawo futhi wehlise kancane kuze kube yilapho amajikijolo eqala ukugqashuka futhi ingxube inciphe cishe ngesigamu. Lokhu kuzothatha cishe imizuzu engama-20. Uma ingxube yakho yehle ngesigamu futhi isenamanzi, qhubeka upheke kuze kuphume wonke uketshezi.
Kwesinye isikhathi govuza ingxube ukuvimbela ukushisa. Kufanele ugcine unezinkomishi ezi-2 zokwehliswa kwe-sitrobheli esinyene ezibukeka njengo-tomato sauce. Dlulisela kwesinye isitsha bese upholile ngaphambi kokusetshenziswa.
Uzosebenzisa okunye ukwehliswa kwe-batter yekhekhe, okunye ukuqhwa futhi okunye ukugcwalisa phakathi kwezendlalelo zekhekhe ukuthola umswakama owengeziwe. Ukuncishiswa kwensalela kungagcinwa efrijini kuze kube isonto elilodwa noma iqandiswe izinyanga eziyi-6.
Imiyalo yekhekhe le-Strawberry
QAPHELA: KUBALULEKE KAKHULU ukuthi zonke izithako zokushisa ekamelweni ezibalwe ngaphezulu ukushisa kwamakamelo hhayi ukubanda noma ukushisa.
Qiniseka ukuthi ukhipha ukuncishiselwa kwakho kwe-sitrobheli esiqandisini ihora eli-1 ngaphambi kokwenza ikhekhe lakho ukuze kufike ekamelweni lokushisa.
Lungisa i-rack rack endaweni emaphakathi bese ushisa kuqala ku-350ºF / 176ºC.
Gcoba amapani amathathu wamakhekhe nge-goop yekhekhe noma ukukhishwa kwephan okuncanyelwayo
Kwisitsha esihlukile esiphakathi, hlanganisa ubisi, ukunciphisa isitrobheli, isitrobheli emulsion, ukukhishwa kwe-vanilla, ukukhishwa kukalamula, uketshezi lukalamula, ujusi kalamula, nokubala kokudla okubomvana.
Kwesinye isitsha esiphakathi nendawo, hlanganisa ufulawa, i-powder baking, i-baking soda nosawoti.
Faka ibhotela lokushisa ekamelweni kumxube wakho wokuma nokunamathiselwe kwephedi bese ushaya ngejubane eliphakathi uze ubushelelezi futhi ucwebezele, cishe imizuzwana engama-30.
Kancane kancane ufafaze ushukela, shaya kuze kube yilapho inhlanganisela iphaphatheka futhi icishe ibe mhlophe, cishe imizuzu engu-3-5.
Faka abamhlophe bamaqanda ngasikhathi sinye, ushaye imizuzwana engu-15 phakathi. Ingxube yakho kufanele ibukeke ibumbene kuleli phuzu. Uma libukeka ligobile futhi liphukile, ibhotela lakho noma abamhlophe bamaqanda babebanda kakhulu.
Hlanganisa ngejubane eliphansi bese ufaka cishe ingxenye yesithathu yezithako ezomile ku-batter, kulandelwe masinyane cishe ingxenye yesithathu yenhlanganisela yobisi, hlanganisa kuze kube yilapho izithako zicishe zifakwe ku-batter. Phinda inqubo izikhathi ezimbili ngaphezulu. Lapho i-batter ibonakala ihlanganisiwe, yeka i-mixer bese uhlikihla izinhlangothi zesitsha nge-spatula yenjoloba. Uma kubukeka njenge-ayisikhilimu, ukwenze kahle!
Hlukanisa i-batter ngokulinganayo phakathi kwamapani alungiselelwe. Smooth iziqongo nge-spatula yenjoloba.
Bhaka amaqebelengwane ku-350ºF / 176ºC aze azizwe eqinile phakathi nendawo futhi i-toothpick iphuma ihlanzekile noma enemvuthuluka embalwa kuyo, cishe imizuzu engama-30-35.
Beka amapani ngaphezulu kweraki yocingo bese uyeka kuphole imizuzu eyi-10. Ngemuva kwalokho faka amakhekhe akho kuma-racks bese upholile ngokuphelele.
Uma selehlile, bopha ungqimba ngalunye ekugoqeni kwepulasitiki bese uwafaka esiqandisini noma umise ngaphambi kokuhlanganisa ikhekhe lakho.
Beka abamhlophe bamaqanda noshukela oluyimpuphu esitsheni sokuxuba esima. Namathisela i-whisk bese uhlanganisa izithako phansi bese ushaya phezulu imizuzu engu-5
Beka abamhlophe bamaqanda abancishisiwe noshukela oluyimpuphu esitsheni somxube wakho wokuma. Faka okunamathiselwe kwe-whisk bese uhlanganisa izithako ngaphansi, bese ushaya phezulu imizuzu engu-5.
Faka ibhotela lakho elithambile ezihlangwini kanye nesiswebhu phezulu imizuzu eyi-8-10 lize libe mhlophe kakhulu, likhanye futhi licwebezele. Kungabukeka kugobile futhi kuphuzi ekuqaleni, lokhu kuvamile. Qhubeka ubhaxabule.
Faka ukwehliswa kwe-sitrobheli, ukukhishwa kwe-vanilla nosawoti bese uqhubeka nokushaya kuze kufakwe.
Ongakukhetha: Shintshela kokunamathiselwe kwe-paddle bese uxuba phansi imizuzu eyi-15-20 ukwenza i-buttercream ibe bushelelezi kakhulu futhi ususe amagwebu omoya.
Beka ungqimba lwakho lokuqala lwekhekhe le-sitrobheli kupuleti lekhekhe noma ebhodini lekhekhe. Gweba i-dome uma kudingeka ngommese obukhali ngakho phezulu kwekhekhe kuyisicaba.
Faka isendlalelo esincanyana kakhulu noma ukunciphisa kwakho okupholile ngaphezulu kwendawo esikiwe. Lokhu kusiza ukungena kukhekhe futhi kungeza umswakama nokunambitheka kwe-sitrobheli.
Faka ungqimba lwe-buttercream, ngidubula cishe u-1/4 '. Smooth nge-spatula yakho ye-offset ize ibe yisicaba.
Frost ingaphandle lekhekhe lakho nge-buttercream esele bese uyihlobisa ngokusha okuthile. ama-strawberry uma ufisa.
Qiniseka ukuthi zonke izithako zakho (amaqanda amhlophe, ubisi, ibhotela, ukunciphisa) izinga lokushisa ekamelweni noma ukufudumala okuncane ukuze i-batter yakho ingavimbi.
Ukuze uphumelele kakhulu, sebenzisa isikali sokudla ukukala izithako zakho. Ukuguqula le recipe kube izinkomishi kungaholela ekwehlulekeni. Funda iposi lami le-blog lokuthi ungasisebenzisa kanjani isikali ukuthola eminye imininingwane.
Ngisebenzisa I-pinkolor kagesi yaseMelika umbala wokudla ukuze uthole umbala wami omuhle obomvana. Kungabonakala njengokukopela, kepha uma ungakwengezi, umbala ovela kuma-strawberry uzobhaka ikhekhe lakho lizophenduka libe mpunga.
Ngisebenzisa my IBosch Universal Plus mixer yalokhu, kepha ungasebenzisa noma iyiphi i-mixer ye-KitchenAid noma i-mixer yesandla.
Kufanele usebenzise ama-WHITES amaqanda kule recipe, ophuzi ovela eqandeni ungaguqula ingaphakathi lepentshisi lakho lekhekhe.
Ngithanda ukusebenzisa amafutha kaLorAnn isitrobheli sokubhaka i-sitrobheli, kepha ungasebenzisa futhi ukukhipha.
Lapho wenza ukunciphisa kwakho, inhloso ukuthola uketshezi oluningi ngangokunokwenzeka ngaphandle kokushisa ama-strawberry. Ingxube kufanele ibukeke njengo-tomato sauce ojiyile futhi izobe yehliswe ngesigamu.
Amanothi we-Strawberry Buttercream:
Qiniseka ukuthi isithwathwa sakho sikhanya kakhulu futhi simhlophe ngaphambi kokungeza ku-puree. Yinambithe, uma isanambitha njengebhotela, qhubeka uyishaye ize ithande u-ayisikhilimu omnandi.
Uma i-buttercream yakho ibukeka ijijekile, kubanda kakhulu. Thatha i-1/2 inkomishi ye-buttercream bese uyincibilikisa ku-microwave kuze kube yilapho incibilika nje. Cishe amasekhondi ayi-10-15. Thela futhi emuva ku-buttercream yakho, bese uxuba kuze kube ukhilimu.
Ukukhonza:1ukukhonza|Amakholori:603kcal(30%)|Amakhabhohayidrethi:63g(amashumi amabili nanye%)|Amaprotheni:3g(6%)|Amafutha:39g(60%)|Amafutha agcwalisiwe:24g(120%)|Cholesterol:102mg(3. 4%)|I-Sodium:222mg(9%)|Potassium:89mg(3%)|Umucu:1g(4%)|Ushukela:amashumi amahlanug(56%)|Uvithamini A:1190IU(24%)|Uvithamini C:2.9mg(4%)|I-calcium:37mg(4%)|Insimbi:0.8mg(4%)
UDavid Harbor Wembula Lapho Izinto Ezingaziwa Kulindeleke Ukugoqa Ukukhiqizwa Ngesizini 4
Izinto eziyi-10 Abafana Abafanele Ukuyeka Ukugqoka EGym
UKate Winslet Akaze Athandane Nosuku Leo DiCaprio Ngoba Umbona Njengomunye Wabafana
Ingabe Uyabesaba Ubumnyama uma kuqhathaniswa neGoosebumps — Yikuphi Umbukiso Wezingane Okwesabisayo Oshisayo?
bheka njengesilima unebhulukwe lakho phansi
ungayifaka kanjani intambo yomoya
siyini isichazamazwi sasemadolobheni thot
siphila emphakathini lapho